Izambulo zika 'Becka Paulson' zikaStephen King Iqondiswe ku-CW
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Izambulo zika 'Becka Paulson' zikaStephen King Iqondiswe ku-CW
Abakwa-CW bathathe amalungelo okuzivumelanisa nezimo ukuze UStephen King's Indaba emfushane “Izambulo zika 'Becka Paulson” ngaphansi kwesihloko esisebenzayo izambulo ngokusho komnqamulajuqu.
Ngemuva kokuzidubula ngephutha ebuchosheni ngesibhamu sepikili, uPollyanna-ish Becca Paulson uqashwa nguJesu ongaphezu kwakhe ukuthi abe "okhethiweyo" wakhe ekunqandeni i-apocalypse. Ukuze asindise umhlaba, uBecca kuzofanele akhombise ukuthi iplanethi yethu ebuyela emuva kakhulu iyahlengeka - kuqala ngedolobha lakubo elisemaphakathi ntshonalanga.
UMaisie Culver (Umuntu Wokugcina Omile) kulindeleke ukuthi ibhale lolu chungechunge olususelwa endabeni kaKing, kanti uKatie Lovejoy uzosebenza njengomdidiyeli omkhulu.
Indaba yashicilelwa ekuqaleni kukhishwa i- Itshe eligingqikayo emuva ngo-1984 futhi yasetshenziswa njengomthombo wokuqukethwe isiqephu senguqulo yango-1990 ye- Imikhawulo Engaphandle (okufanekiselwe ngenhla). Leso siqephu sabeka uCatherine O'Hara (I-Schitt's Creek), UJohn Diehl (Stargate), noSteven Weber (The Shining uchungechunge oluncane). U-Weber uphinde waqondisa lesi siqephu.
Ngenkathi ingakaze ifakwe kwelinye lamaqoqo eNkosi, yashintshwa njengesiqeshana encwadini yakhe AbakwaTommyknockers.
Kuzoba mnandi ukubona ukuthi uCulver ukwazile kanjani ukwandisa indaba emfushane ibe uchungechunge, noma kunjalo ngokungangabazeki kunamathuba amaningi akhelwe encazelweni yayo.
iHorror izokugcina uthunyelwe izambulo njengoba imininingwane eminingi itholakala.
UKatie LovejoyUMaisie CulverizambuloIzambulo zikaBeka Paulsonstephen kingI-CWWaylon Jordan
BUKA: I-trailer yoMqondisi uRob Grant 'Uyaphila' Iyamangalisa futhi Inamandla!
I-trailer yakwa'Sputnik 'Iletha Okungaphandle Komhlaba, IGory Terror